Talyaaniga - ALinks
Maqaallada ku saabsan Talyaaniga
Marabtaa inaad shaqo ka hesho Talyaaniga? Talooyin iyo shuruudaha halkan !!
November 25, 2020 Shubham Sharma Italy, shaqo
Hagaha shaqada iyo shaqo raadinta Talyaaniga !! Talyaanigu waa waddan Yurub ah oo ku wareegsan dhowr jasiiradood. Shaqada iyo shaqada ka socota Talyaanigu waa kuwo aad loogu qanco. Ka shaqaynta Talyaaniga, wax dhibaato ah kalama kulmi doontid luqadda Ingiriisiga.
November 9, 2020 Shubham Sharma Italy, fiisada
Dhaqaalaha toddobaad ee adduunka ugu weyn, Jamhuuriyadda Talyaaniga, wuxuu ku yaal wadnaha badda Dhexe. Waxay ka soo baxday Boqortooyadii Roomaanka, oo ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee Yurub soo maray. Natiijo ahaan, way badan yihiin
Fiisaha Talyaaniga ee Hindida
October 19, 2020 Maitri Jha Italy, fiisada
Rome, Florence, Venice, Milano. Talyaanigu waa meel loo socdo meel kale oo aan ahayn. Waxay leedahay magaalooyin badan oo qurux badan oo soo socda. Waxaas oo dhan ayaa loogu talagalay dalxiisayaasha inay ku raaxaystaan ​​farshaxanka, muusikada, dhismaha, moodada, dukaamaysiga, iyo cuntada. Waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya
Fiisaha dalxiis ee Talyaaniga ee muwaadiniinta Hindida ah
October 6, 2020 Maitri Jha Italy, fiisada
Weligaa ma rabtay inaad aragto rinjiyeynta asalka ah ee da Vinci? Cashadii ugu dambeysay ama Botticelli dhalashadii Venus? Ka warran sawirada caanka ah ee Michelangelo ee Sistine Chapel? Waxaa la joogaa waqtigii lagu odhan lahaa 'Ciao' Talyaaniga haddii aad madaxu salaaxdo
June 11, 2020 Karuna Chandna Italy, safarka
Waxay ku nooshahay Yurub, waddanka kabaha leh. Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka. Taasi waxay caan ku tahay sababo kala duwan awgood. Oo ay ku jiraan farshaxanka, dahabka, magaalooyin farxadda leh, muuqaal qurux badan, dad jecel, iyo cunto heer sare ah. Talyaanigu wuxuu bixiyaa a
Socdaalka Talyaaniga: Talooyinka Gaadiidka !!
Waxaa laga yaabaa 18, 2020 Karuna Chandna soo qaado, Italy
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah u diyaargarowga ciidaada Talyaaniga waa sidaad u socoto iyo, badankood, sidaad u mareyso. Fahamkaaga maalinlaha ah ee Talyaaniga ayaa safarkaaga lagu kala soocay. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu jaban ayaa noqon kara tareenno. Kireynta
Shopaholics? Ka dukaamaysano Suuqyadan Talyaaniga .. !!
Waxaa jira boqol sababood oo ah inaad u booqato Talyaaniga ugu yaraan hal mar noloshaada. Talyaanigu waxbadan ayey ka bixiyaan, sida khibrad soo jiidasho leh markay wax iibsaneyso. Dalkani waa hoyga meelaha ugu fiican ee laga dukaameysto
Qorshaynta Safarka Talyaani? Booqo Soojiidashada Dalxiisayaasha Ugu Weyn!
April 7, 2020 Karuna Chandna Italy, safarka
Booqashada Talyaaniga? Waa kuwan qaar ka mid ah Soojiidashada Dalxiiska ee Talyaaniga. Ma ahan inuu seego soojiidashadaan. Talyaanigu waa halka uu ku dhashay Boqortooyadii Roomaanka. Soojiidashada ugu sareysa ee Talyaanigu dalxiisyaashu maahan dhammaan farshaxanka iyo dhismaha. Waddanku sidoo kale wuxuu ku manaystay Soojiidasho dabiici ah.
Intee in leeg ayaa Qiimaha Safarka Talyaanigu? Aan ogaano !!
March 1, 2020 Karuna Chandna Italy, safarka
Talyaanigu waa waddan kumanaan kun oo dad ah oo adduunka ah ay booqdaan sanad walba. Waxay caan ku tahay aduunka oo dhan muuqaal qurxoon oo qurux badan Umaddan reer Yurub waxay caan ku tahay inay tahay meel aad qaali u ah booqashada.
Ma dooneysaa inaad wax ka barato jaamacadaha Talyaaniga? Hubi dhammaan faahfaahinta jaamacadaha halkan!
January 3, 2020 Karuna Chandna Italy, waxbarasho
Khasnadaha taariikhiga ah ee Talyaaniga iyo cunnada quruxda badan waxay sii wadaan inay soo jiitaan dadka soo booqda. Talyaanigu sidoo kale waa meel daraasad miisaaniyadeed ku habboon. In kasta oo qiimaha hoyga uu noqon karo mid sareeya magaalooyin waaweyn sida Rome ama Milan. Laakiin magaalooyinka yaryar ayaa aad uga jaban Talyaaniga, Talyaaniguna waa